Fiantohana ny famonjena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fahazoana antoka ny famonjena
Ny Baiboly dia manamafy fa izay rehetra mitoetra amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy dia hovonjena ary tsy hisy hanala azy ireo amin’ny tanan’i Kristy na oviana na oviana. Ny Baiboly dia manantitrantitra ny fahatokian’ny Tompo tsy manam-petra sy ny fahafenoan’i Jesosy Kristy tanteraka ho amin’ny famonjena antsika. Ambonin’izany, dia manantitrantitra ny fitiavana mandrakizay an’Andriamanitra ho an’ny olona rehetra izy ary mamaritra ny filazantsara ho toy ny herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Amin’ny fananana izany antoka ny amin’ny famonjena izany, dia antsoina ny mino mba hiorina mafy amin’ny finoana sy hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika. (Johanes 10,27- enina ambin'ny folo; 2. Korintiana 1,20- enina ambin'ny folo; 2. Timoty 1,9; 1. Korintiana 15,2; Hebreo 6,4-6; John 3,16; Romana 1,16; Hebreo 4,14; 2. Petrus 3,18)
Ary ahoana ny hoe "fiarovana mandrakizay?"
Ny foto-pinoana momba ny "fiarovana mandrakizay" dia nantsoina tamin'ny fiteny teolojika ho "fikirizana ny olo-masina". Amin'ny fampiasana mahazatra dia voaresaka miaraka amin'ilay fehezanteny "indray mandeha, voavonjy hatrany" na "kristiana indray mandeha, kristiana foana".
Betsaka ny soratra masina manome antsika antoka fa efa manana famonjena isika, na dia mila miandry fitsanganana mba handova ny fiainana mandrakizay sy ny fanjakan'Andriamanitra aza isika. Ireto misy ampahany sasany amin'ny fampiasana ny Testamenta Vaovao:
Izay mino no manana fiainana mandrakizay (Jao 6,47) ... izay mahita ny Zanaka ka mino Azy no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany (Jao 6,40) ... ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako (Jaona. 10,28) ... Koa ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy (Romana 8,1) ... [Tsy misy] mahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika (Romana 8,39) ... [Kristy] koa dia hihazona anareo mafy hatramin’ny farany (1. Korintiana 1,8) ... Fa mahatoky Andriamanitra ka tsy mamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo (1. Korintiana 10,13) ... izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahavita izany koa (Filipiana 1,6) ... fantatsika fa avy tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana isika (1. Johannes 3,14).
Ny fotopampianaran'ny fiarovana tsy miankina dia mifototra amin'ny toky toy izany. Fa misy lafiny iray hafa mahakasika ny famonjena. Toa misy ihany koa ny fampitandremana fa afaka miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny kristiana.
Nampitandremana toy izao ny Kristianina: “Ary amin’izany, na zovy na zovy no manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka tsy ho lavo.” (1. Korintiana 10,12). Hoy i Jesosy: “Miambena sy mivavaha mba tsy ho latsaka amin’ny fakam-panahy!” (Marka 14,28), ary “hihamangatsiaka ao amin’ny maro ny fitiavana.” ( Matio 24,12). Nanoratra ny apostoly Paoly fa “amin’ny finoana” ny sasany ao amin’ny fiangonana
Efa vaky sambo »(1. Timoty 1,19). Nampitandremana ny Eglizy tany Efesosy fa hanaisotra ny fanaovan-jirony i Kristy ka handroaka ny Laodikia matimaty amin’ny vavany. Ny fananarana ao amin'ny Hebreo dia tena mahatsiravina 10,26-31:
«Satria raha nanota am-pahavitrihana rehefa nahazo ny fahalalana ny fahamarinana isika dia tsy hanana fahafoizan-tena intsony noho ny fahotantsika, fa tsy misy afa-tsy ny fiandrasana fitsarana mahatsiravina ary ny afo manitra rakotry ny fahavalo. Raha misy mandika ny lalàn'i Mosesy dia tsy maintsy maty amin'ny famindrampony ho an'ny vavolombelona roa na telo izy. Hatraiza ny fanasaziana mahatsiravina ataonao izay manitsakitsaka ny Zanak'Andriamanitra ary mihevitra fa tsy madio ny ràn'ny fanekena izay nanamasinana azy ary nanaratsy ny fanahin'ny fahasoavana? Satria fantatsika ilay niteny hoe: Ahy ny valifaty, tiako ny hamaly azy: ary hitsara ny olony ny Tompo. Mahatsiravina ny hidina eo an-tanan'ilay Andriamanitra velona. »
Hebreo koa 6,4-6 milaza amintsika hoe:
«Satria tsy afaka ho an'ireo izay nohazavaina sy nanandrana, nomena ny fanomezana avy any an-danitra ary nizara tao amin'ny Fanahy Masina ary nanandrana ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny tontolo ho avy ary nivadika ho fanavaozana indray ny fibebahana , satria izy ireo dia nohomboany tamin'ny hazo fijaliana indray ny Zanak'Andriamanitra ary maneso azy ireo. »
Noho izany dia misy ny olon-dehibe ao amin'ny Testamenta Vaovao. Betsaka ny andinin-tsoratra masina izay tsara momba ny famonjena mandrakizay izay ananantsika ao amin'i Kristy. Toa famonjena tokoa izany famonjena izany. Saingy ny andininy toy izany dia malemy amin'ny fampitandremana sasany izay toa milaza fa mety hamoy ny famonjena azy ny kristiana amin'ny alàlan'ny tsy finoana maharitra.
Koa satria ny fanontaniana momba ny famonjena mandrakizay, na ny kristiana ve dia azo antoka - izany hoe rehefa voavonjy, dia voavonjy foana - matetika noho ny soratra masina toy ny Hebreo. 10,26-31 tonga, andao hojerentsika akaiky ity andalana ity. Ny fanontaniana dia hoe ahoana no tokony handikantsika ireo andininy ireo? Ho an’iza no anoratan’ny mpanoratra, ary inona no tena fototry ny “tsy finoan’ny olona”, ary inona no nekeny?
Voalohany, andao jerena ny hafatra ao amin'ny Hebreo manontolo. Ny ivon'ity boky ity dia ny filàna mino an'i Kristy ho sorona feno noho ny ota. Tsy misy mpifaninana. Ny finoana irery ihany no mila miankina aminy. Ny fanazavana ny fanontaniana momba ny mety famoizana famonjena izay mahatonga ny andininy 26 dia mitoetra ao amin'ny andininy farany amin'ity toko ity: "Isika tsy mba naman'ireo mihemotra ka voaheloka, fa an'ny mino sy mamonjy ny fanahy" (and. 26). Misy mihemotra, fa izay mijanona ao amin'i Kristy kosa tsy mety ho very.
Io fanomezan-toky ho an’ny mpino io koa dia hita ao amin’ireo andininy talohan’ny Hebreo 10,26. Matoky ny Kristianina fa eo anatrehan’Andriamanitra izy ireo amin’ny alalan’ny ran’i Jesosy (and. 19). Afaka manatona an’Andriamanitra amin’ny finoana tonga lafatra isika (and. 22). Ny mpanoratra dia mananatra ny Kristianina amin’izao teny izao: “Aoka isika hihazona ny fanekena ny fanantenana ka tsy hihozongozona; fa mahatoky Izay nampanantena azy ireo » (and 23).
Ny fomba iray hahatakarana ireo andinin-teny ao amin’ny Hebreo 6-10 momba ny “fihemorana” ireo dia ny fanomezana tarehin-javatra mihevi-tena ho an’ny mpamaky mba hampirisihana azy ireo haharitra amin’ny finoany. Andeha hojerentsika, ohatra, ny Hebreo 10,19-39 amin'ny. Ny olona iresahany dia manana “fahalalahana hiditra ao amin’ny fitoerana masina” amin’ny alalan’i Kristy (and. 19). Afaka “manatona an’Andriamanitra” ianao (and. 22). Ireo olona ireo no hitan’ny mpanoratra fa “mifikitra amin’ny fanekena ny fanantenana” (and. 23). Tiany handrisika azy ireo ho amin’ny fitiavana lehibe kokoa sy ny finoana lehibe kokoa aza (and. 24).
Ao anatin'io fampaherezana io dia nandoko ny sarin'izay mety hitranga amin'izy ireo izy - ara-keviny araka ny teôria voalaza - izay "minia maharitra amin'ny ota" (and. 26). Na izany aza, ny olona noresahiny dia ireo izay "nahazo fahazavana" ary nijanona ho mahatoky nandritra ny fanenjehana (and 32-33). Nametraka ny "fitokiany" amin'i Kristy izy ireo, ary ny mpanoratra dia mamporisika azy ireo haharitra amin'ny finoana (and 35-36). Ary farany, amin'ireo olona nanoratany taratasy dia nilaza izy fa tsy anisan'ireo mihemotra sy voaheloka isika fa an'ny mino sy mamonjy ny fanahy ”(and 39).
Mariho koa ny fomba nanomezan’ny mpanoratra ny fampitandremany momba ny “fivadiham-pinoana” ao amin’ny Hebreo 6,1-8 vita: «Na dia miteny toy izany aza izahay, ry malala, dia resy lahatra izahay fa tsara kokoa ny aminareo ka hovonjena ianareo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho an’ny anarany tamin’ny fanompoana sy ny fanompoanareo ny olona masina” (and. 9-10). Notohizan’ny mpanoratra fa nilaza izany zavatra izany tamin’izy ireo izy mba “hanehoan’izy ireo izany zotom-po izany mba hihazonana ny fanantenana hatramin’ny farany” (and. 11).
Noho izany dia azo atao ny miresaka momba ny toe-javatra iray izay hahafahan'ny olona manana finoana marina an'i Jesosy. Fa raha tsy azo atao izany, mety sy mahomby ve ilay fampitandremana?
Mety hanary ny finoany amin’ny tontolo tena izy ve ny Kristianina? Ny Kristianina dia afaka "miala" amin'ny heviny hoe manao fahotana (1. Johannes 1,8-2,2). Mety ho kamo ara-panahy ianao amin'ny toe-javatra sasany. Kanefa moa ve izany indraindray dia mitarika ho amin’ny “fivadiham-pinoana” ho an’ireo izay manana finoana marina an’i Kristy? Tsy mazava tsara ao amin’ny Soratra Masina izany. Eny tokoa, afaka manontany isika hoe ahoana no hahatonga ny olona iray ho "tena" ao amin'i Kristy ary amin'ny fotoana iray ihany koa dia "miala".
Ny toeran'ny Fiangonana, araka ny voalaza ao amin'ireo finoana ireo, ny olona izay manana finoana maharitra nomen'Andriamanitra an'i Kristy dia tsy hoesorina mihitsy eo an-tanany. Amin'ny teny hafa, rehefa mifantoka amin'i Kristy ny finoan'ny olona iray dia tsy mety ho very izy. Raha mbola mametraka an'io fiaiken-keloka io ny Kristianina dia azo antoka ny famonjena azy ireo.
Ny fanontaniana momba ny fotopampianaran'ny "voavonjy indray, voavonjy hatrany" dia misy ifandraisany amin'ny fahatongavan'ny finoantsika an'i Kristy. Tahaka ny efa voalaza teo aloha, ny taratasy ho an'ny hebreo toa milaza ny olona nanana "finoana" farafaharatsiny voalohany saingy iza no mety hampidi-doza ho very.
Manaporofo izany amin'ny teboka nataontsika teo amin'ny andalana teo aloha. Ny fomba tokana hahazoana ny famonjena dia ny mandà ny làlana tokana mankany amin'ny famonjena - ny finoana an'i Jesosy Kristy.
Ny taratasy ho an’ny Hebreo dia momba ny fahotana noho ny tsy finoana ny asa fanavotana nataon’Andriamanitra, izay notanterahiny tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy (jereo ohatra ny Hebreo. 1,2; 2,1- enina ambin'ny folo; 3,12. 14; 3,19-4,3; 4,14). Ny Hebreo toko faha-10 dia miresaka amin’ny fomba manaitra io olana io eo amin’ny andininy faha-19, izay milaza fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no ananantsika fahafahana sy fahatokiana feno.
Ny andininy faha-23 dia mampirisika antsika hihazona ny fiekenantsika ny fanantenana. Fantatsika ireto manaraka ireto: raha mbola mitana ny fiekenantsika ny fanantenana isika, dia tena matoky ary tsy ho very ny famonjena. Io fiaiken-keloka io dia misy ny finoantsika ny fampihavanana nataon'i Kristy amin'ny fahotantsika, ny fanantenantsika fiainana vaovao ao aminy, ary ny fahatokiantsika lalandava aminy amin'ity fiainana ity.
Tsy dia mailo matetika amin'ireo izay mampiasa ny teny filamatra hoe "voavonjy indray mandeha", voavonjy hatrany "ny tian'izy ireo lazaina. Io teny io dia tsy midika fa voavonjy fotsiny ny olona iray satria nanisy teny vitsivitsy momba an'i Kristy izy. Ho voavonjy ny olona raha efa nandray ny Fanahy Masina, raha nateraka indray tao anaty fiainana vaovao ao amin'i Kristy izy ireo. Ny tena finoana dia aseho amin'ny fahatokiana an'i Kristy, izay midika fa tsy miaina ho an'ny tenantsika fotsiny isika fa ho an'ny Mpanavotra.
Ny fehiny dia ny hoe raha mbola mitoetra ao amin’i Jesosy isika dia voaro ao amin’i Kristy (Hebreo 10,19-23). Manana fahatokiana feno momba ny finoana Azy isika, satria Izy no mamonjy antsika. Tsy mila manahy sy mametraka ny fanontaniana isika. "Ho vitako ve izany?" Ao amin’i Kristy isika dia tsy manana ahiahy - Azy isika ary voavonjy, ary tsy misy maharombaka antsika amin’ny tanany.
Ny hany làlantsika very dia ny manitsakitsaka ny rany ary manapa-kevitra fa tsy mila azy amin'ny farany isika ary ampy ho an'ny tenantsika. Raha izany no izy, dia tsy hanahy ny hamonjy ny tenantsika akory isika. Raha mbola mijanona ho mahatoky ao amin'i Kristy isika, dia mahazo antoka fa hanatanteraka ny asa izay natombony teto amintsika.
Ny zavatra mampionona dia izao: tsy mila miahiahy momba ny famonjena isika ary milaza hoe: "Inona no mitranga raha tsy mahomby aho?" Efa nahomby isika. I Jesoa no mamonjy antsika ary tsy mahomby. Mety tsy ho vitantsika ve ny hanaiky izany? Eny, saingy amin'ny maha mpitarika Kristiana antsika, dia tsy nahavita nanaiky izany isika. Rehefa avy nandray an'i Jesosy indray mandeha isika dia mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, izay manova antsika ho tahaka ny endriny. Faly isika fa tsy matahotra. Milamina izahay fa tsy matahotra.
Raha mino an'i Jesoa Kristy isika dia mijanona tsy manahy momba ny "vitantsika". “Namboatra” ho antsika. Miala sasatra ao isika. Miato izahay. Mino sy matoky azy isika fa tsy ny tenantsika. Noho izany, ny fanontaniana hoe na mety ho very ny famonjena antsika aza isika dia tsy hampahory antsika intsony. Nahoana? Satria mino isika fa ny asan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia ny zavatra rehetra ilaintsika.
Tsy mila ny fahatanterahany Andriamanitra. Mila azy isika ary nomeny antsika ho fanomezana maimaimpoana amin'ny finoana an'i Kristy. Tsy ho faty isika satria tsy miankina amintsika ny famonjena antsika.
Raha fintinina, dia mino ny Fiangonana fa ireo izay mitoetra ao amin'i Kristy dia tsy azo very. Ianao dia "azo antoka". Fa miankina amin'ny hevitry ny olona io rehefa miteny ny hoe "voavonjy tokana, voavonjy hatrany".
Raha ny momba ny foto-pampianarana momba ny predestialy dia afaka mamintina ny toeran'ny Fiangonana amin'ny teny vitsivitsy isika. Tsy mino isika fa Andriamanitra dia efa nanapa-kevitra foana hoe iza no ho very ary iza no tsy hanao. Hevitry ny Fiangonana fa hanome am-pahamarinana sy rariny Andriamanitra ho an'izay tsy nandray ny filazantsara eto amin'ity fiainana ity. Ny olona toy izany dia hotsaraina mitovy amintsika, izany hoe na izy ireo nametraka ny fahatokisany sy ny finoany an'i Jesoa Kristy.